त्यसपछि एकपटक प्रयोग गरेपछि उनलाई आनन्द आउन थाल्यो ! – Sanjal Nepal
Homeमनोरंजनत्यसपछि एकपटक प्रयोग गरेपछि उनलाई आनन्द आउन थाल्यो !
त्यसपछि एकपटक प्रयोग गरेपछि उनलाई आनन्द आउन थाल्यो !
December 16, 2020 admin मनोरंजन 5049
चीनमा से’ क्स टो’यको बजार १५ अर्ब डलर बराबर पुगेकोे छ। युवामाझ लोकप्रिय रहेकाले यसको बजार बढेको हो। टो’यको प्रयोग बढ्नुमा कोरोना
महामारीका कारण एक्लिएका युवाकोे बाध्यता हो वा चिनियाँ समाज साँच्चिकै बदलिएको हो त? घरमा बन्द रहिरहँदा २७ वर्षकी एमीले आफूलाई एक्लो महसुस गरिरहेकी थिइन्। कोरोना महामारी कालमा राजधानी बेइजिङमा बाहिर निस्केर डेटिङ गर्ने सम्भावना थिएन। यस्तो बेला उनी अनलाइन
च्याटमा व्यस्त हुन्थिन्। च्याटमा उनीजस्तै केही महिलाले टो’यको कुरा उठाए। सहवासबाट टाढै रहन बाध्य एमीलाई उनीहरुले टो’य उपयोग गर्न प्रेरित गरे। एमी भन्छिन्, ‘पहिले अलिकति डर र संंकोच थियो।’ तर, एकपटक प्रयोग गरेपछि उनलाई आनन्द आउन थाल्यो।
संसारमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश चीनमा टो’यको माग बढिरहेको छ। यसअघि बेडरुममा उपयोग हुने यस्ता साधनको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता थियो चीन। कोरोना महामारीका कारण
देशभित्रै अनगिन्ती जोडी बेग्लाबेग्लै रहन बाध्य भए। मनोरञ्जनका सार्वजनिक स्थान पनि लामै समय बन्द भए। यसबाहेक चीनको संस्कृतिमा आएको खुलापन र युवामा पश्चिमा प्रभावले पनि टो’यको प्रभाव बढेको मान्छन् जानकारहरू। यौ ‘न र स’ म्बन्धमा परामर्श दिने प्रसिद्ध चिनियाँ ब्लगर हेङका अनुसार धेरै महिला टो’यप्रति खुला सोच राख्छन्। अधिकांश महिलाले यसलाई ‘प्राकृतिक र सामान्य’ ठान्छन्। ट्विटर जस्तै चीनको प्लेटफर्म वाइबोमा सात लाख फलोअर भएकी हेङ टो’यका बारेमा नियमित चर्चा गर्छिन्।
चिनियाँ महिलाका कारण टो’यको बजार नयाँ
उचाइमा पुगेको उनको दाबी छ।
चीनमा सहवाससँग जोडिएका धारणा परम्परागत छ। देशमा नि’लो फिलिम पूर्ण प्रतिबन्धित छ। अनलाइन प्लेटफर्ममा नराम्रा क”न्टेन्ट हटाउन चिनियाँ प्रशासनले सधैंजसो छापा मा’ र्छ। राष्ट्रपति सी चिनफिङले साइबर स्पे स ‘सफा र यथार्थ’ बनाउन जोड दिएका छन्। यसबाहेक चिनियाँ प्रशासन समाजमा विवाह र पारिवारिक मूल्यलाई प्राथमिकता दिन प्रयासरत छ। कारण चीनमा जन्मदर निकै कम छ। पारपाचुकेले कीर्तिमान कायम गरेको छ। सन् २०१९ मा मात्रै ३१ लाख जोडीले पारपाचुके गरेका छन्। यसले पनि चीनको पारम्परिक समाजमा आउँदै गरेको परिवर्तनबारे थाहा हुन्छ।
खुसिको खबर : ५ हजार वर्ष पुरानो गणेशको मुर्ति फेला पर्यो, बेवास्ता नगर्नुहोला नत्र हानी होला ॐ लेखि सेयर गरौं ।
प्याजले बढाउन्छ लामो समय यो’ न आनन्द, कसरी प्रयोग गर्ने ? हेर्नुहोस् विज्ञको सुझाव
क’लेज जाँदा बाटै’मा ब्वाइ*फेण्ड सङ्ग ……हेर्नुस् भिडियो
April 10, 2021 admin मनोरंजन 2019
चितवनस्थित बा–आमालाई पनि गुहार्दैनन् उनी। ‘आयआर्जनको अर्कै स्रोत जुटाएको छु,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा सुड्डी–फ्रेन्ड छे मेरो। म भनेपछि हुरुक्कै हुन्छे। पैसाको बन्दोबस्त उसैले गर्दिन्छे। जति मागे पनि ‘छैन’ भन्दिन। आनन्दै छ मलाई।’कमला नामकी ४६ वर्षीया
December 23, 2020 admin मनोरंजन 6103
गुल्मीका भाइरल सचिन भन्दा बैनी झन कमेडि, आफ्नै बैनीको अन्तर्वार्ता लिदै सचिन(भिडियो)
December 25, 2020 admin मनोरंजन 2952
गुल्मी । गाउघरमा आजकल धेरै खालका प्रतिभाहरु भेटिन्छन, भेटाउन पनि सजलो परिरहेको छ सामाजिक सन्जालको सहयोगले पनि गर्दा खेरि सही र उचित प्रतिभाहरुले सही स्थान पाईरहेका छन । आज हामी यस्तै कमला घिमिरे अशोक दर्जी
LEX 18 agenda conversation: Job club (501846)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (473485)
Hello world! (399707)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (364906)
dole traces grow as seasonal jobs dry up (123695)
Technology Training Company Coding Dojo to Open Boise Campus at Trailhead (106428)
Brody king On Why He Wouldn’t depart His full Time Job To signal With WWE (100805)
खेतमा भेटियो रहस्यमय डल्लो, जाँच गर्दा यस्तो सनसनीपूर्ण खुलासा (84565)